बलिउडका टप स्टारको पारिश्रमिक कति ? हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
बलिउडका टप स्टारको पारिश्रमिक कति ? हेर्नुस्
एजेन्सी । धेरैलाई चाँसो हुनसक्छ- बलिउडका चर्चित स्टारको पारिश्रमिक कति होला ? यस्तो प्रश्न तपाइँमा पनि उब्जिएको छ भने आज जवाफ पाउँदै हुनुहुन्छ । बलिउडका स्टारले प्रतिचलचित्र कति पारिश्रमिक लिन्छन् त ? हेर्नुस् सूची-
सलमान खानः कम्तीमा १ सय करोड
आमिर खानः कम्तीमा ८० करोड
शाहरूख खानः कम्तीमा ७५ करोड
अक्षय कुमारः ७५ करोडसम्म
ऋतिक रोशनः ६५ करोडसम्म
रणवीर कपुरः ४० करोड
अजय देवगनः ३५ करोड
रणवीर सिंहः ३२ करोड
अमिताभ बच्चनः २५ करोड
शहिद कपुरः २५ करोड
बरुण धवनः २० करोड
दीपिका पादुकोणः १९ करोड
कंगना राणवतः १७ करोड
सैफअली खानः १६ करोड
करिना कपुरः १६ करोड
प्रियंका चोपडाः १५ करोड
विद्या वालनः १० करोड
कैटरिना कैफः स् १० करोड
अनुष्का शर्माः ८ करोड
आलीया भट्टः ८ करोड
सोनाक्षी सिन्हाः ६ करोड
श्रद्धा कपुरः ५ करोड
ट्याग्स: bollywood top rich actor